ကမ္ဘာကြီးကိုမှဂုဏ်အသရေကိုဘွားမြင်သောသဘာဝအားဖြင့်အမြိုးသမီးတ။ ထိုအဘို့, သင်လိုအပ်သမျှရှိပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်လှပသောအမျိုးသမီးကိန်းဂဏန်းသွယ်လျတဲ့နည်းနည်းခြေထောက်, ကြီးမားတဲ့ဖော်ပြမျက်စိဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေဆံပင်တစ်အဆငျ့ဆငျ့နှင့်အတူမီးလောင်သောသလော အဘယ်ဆံပင်ကျက်သရေတစ်ခုကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် ပို. ပင်ရွေးချယ်မှုချစ်စရာကောင်းတဲ့ charmer တီထွင်နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများက outdo ဖြစ်ပါတယ်သာ။ တစ်ခုမှာ - ထူလက်ရုံးအတွက်သူမ၏ခါးမှကျစ်။ အခြား - အနုစိတ်တဲ့ကြည်နူးဖွယ်စည်းထဲမှာထိပ်ပေါ်မှာစုဆောင်းတဲ့ taut စမ်းဆံပင်ကောက်ကောက်။ တတိယကပင်ဖော်ပြချက် defies ကြောင်းဤသို့သောအနုစိတ်အပိုင်းအစထဲမှာတောက်ပကျီးသူမ၏ရှည်လျားဖြောင့်သော့ခလောက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ သင်ဤဘုန်း join မလား? ဒီတော့လျှင်, ငါတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်လက်မဆိုအကူအညီမပါဘဲသက်တံ့၏ဆံပင်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရန်အဆိုတင်သွင်း။
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆံပင်သူတို့၏ကိုယ်လက်နှင့်အတူထွက်ကိုးကွယ်ကျစ်ဤဆံပင်အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့ပြီးအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်လွန်ကဲကဲအရှေ့တိုင်းအမျိုးသမီးတွေကျင့်သုံး, နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများမှထို့နောက်မင်းသမီး။ လောလောဆယ်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးသင့်လက်နှင့်အတူဆံပင်ထဲကဦးညွှတ်ဖို့ဘယ်လို, ရှိပါတယ်။ ထိုသို့မဆိုအပိုဆောင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါဘူးပုံစံ၏တော်တော်လေး Self-လုံလောက်သောမျိုးပါပဲ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက၎င်း၏ချစ်စရာ hairpins သို့မဟုတ်အနားကွပ်ဖြည့်စွက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်လျှင်မူကား, ထို့နောက်သူကပိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါ့အပြင်တည်နေရာဆံပင်ပုံစံတွေတည်နေရာတပြင်လုံးကိုပုံရိပ်၏စတိုင်လ်များနှင့်ဇာတ်ကောင်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းသတိပြုပါ။ ဥပမာ, လှိုင်းအတက်အကျနဲ့ပေါင်းပြီးဦးခေါင်း၏နောက်ကျောနောက်ကွယ်မှဆံပင်၏လုပ်လေးကို၎င်း၏ဘက်မှာထားကြ၏, မြိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစည်းအဝေးပိုသင့်လျော်သည်။ တကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးတင်းကျပ်သောအနိမ့်-key ကိုစားဆင်ယင် Add, ငါတို့များ၏ရှေ့မှောက်၌။ တောင်မှအခုတရားခွင်၌၌တည်၏။ ညဦးယံအချိန်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဒေါက်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်ထိပ်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ခြမ်းမှဆံပင်၏လေးသည်ဖွတ်မြီးထိုးနိုင်အောင်ဖက်ရှင်လျှင်မူကား, ထို့နောက်ပိုပြီးမကြာသေးမီကယောက်ျားရဲ့နှလုံးသားများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမျိုးသမီးတစ်ယောက် languid သူခိုးကဲ့သို့ဝငျစား။ ယင်းလောကဘောလုံးကိုအောင်မြင်မှု, သို့မဟုတ်ပါကတိကျစွာထောက်ပံ့ပေးအထဲကတညဉ့်။ သငျသညျဝင်စား၏ဤအနုပညာကျွမ်းကျင်ချင်အဘယ်သို့နည်း ထိုအခါရဲ့နောက်ထပ်သွားကြကုန်အံ့။
ပြီးသားအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆံပင်လေး၏ခွငျထောဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုနှစ်ခုကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့တစ်ခုမှာ, ဒုတိယ - ငယ်ရွယ်မင်းသမီးတစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ။ နှစ်ဦးစလုံးနမူနာများအတွက်တူညီအထွေထွေဆံပင်၏အရှည်သည်။ သူတို့ကအနည်းဆုံးအားပခုံး-အရှည်ဖြစ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှကြာကြာသငျ့သညျ။ ဆံပင်ကောက်ကောက်ညင်ညင်သာသာဖြောင့်နှင့်တစ်ဦး curler နှင့်အတူဖြောင့်ဆံပင်ထူ ထပ်. အသွင်ပြောင်း။
အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့အ option ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုသွားဖုံးတစ်ဆယ်တံသင်သို့မဟုတ်မမြင်ရတဲ့, ယွန်းခိုင်မာတဲ့ fixation နှင့်ဖြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ထိပ်မှာဦးညွှတ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကြကုန်အံ့။ တစ်ဖြီး၏အကူအညီနှင့်အတူမိုးခုံးမှာ ponytail သို့အပေါငျးတို့သဆံပင်စုဆောင်းနှင့်သူ၏တီးဝိုင်းတင်းကျပ်။ အခုတော့အမြီးဆံပင်မျှင်အတွက်အပေါ်ဆုံးအလွှာကနေ2စင်တီမီတာတစ် width ကိုခွဲခြားနှင့်နဖူးပေါ်မှာမှောက်လှန်, မမြင်ရတဲ့5စင်တီမီတာကိုပြုပြင်တာတွေ။ အမြီး၏အခြေစိုက်စခန်းမှသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိမေ့လျော့ခြင်းနှင့်အမြီးပေါ်လှဲချဆက်လက်၏ဤကမ်းနားလမ်းနှင့် ပတ်သက်. ။ ကျနော်တို့ဒုတိယပီကေကို ယူ. ဤအရပျမှာပေါ်တွင်တင်ပါကအလယ်ကိုရှာပါ။ ဆံပင်နှစ်ဦးရော်ဘာခညျြအနှောများအကြားပိတ်မိနေ, လက်နက်ဝက်အတွင်းကိုဝေနဲ့ပထမဦးဆုံးမှမမြင်ရတဲ့အောက်ပိုင်းသွားဖုံး attach ။ ကျနော်တို့ဒုတိယစေးပြီးနောက်2lugs အနာဂတ်လေးနှင့် ponytail ဆံပင်တယ်။ က flagellum သို့နှင့်တံသင်သို့မဟုတ်မမြင်ရတဲ့လုံခြုံရေး, ထို lugs တချွတ် palms ဆံပင်ကောက်ကောက်။ အခုတော့နောက်ကျော, designated နဖူးပေါ် inverted ပေး။ အဆိုပါ invisible ဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ nape မှသူမ၏နဖူးမှောက်လှန်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သွားဖုံးဖုံးကွယ်ပြီး "ထုံး" လေးကိုဖန်တီးပါ။ လိမ် flagellum ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူတို့၏အချည်းနှီးသောမျက်စိဖြည့်တဦးတည်းကိုပိုမိုမမြင်ရတဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနည်းငယ်နိမ့်သွားဖုံး၏သော့ခတ်နှင့်ကျန်ရှိနေသောအမြီးနှင့်အတူကဒါကကိုယူပါ။ ကျနော်တို့မမြင်ရတဲ့, Tinker ၏နောက်ဆုံး strands fix နှင့် "နားရွက်" ယင်း၏အရောင်တင်ဆီခိုင်မာတဲ့ fixation ဦးညွှတ်ခြင်းနှင့် zapshikivaem fluffs ။ အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဆံပင်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကျောသို့မဟုတ်နားမှာလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ထိုနည်းတူ။ သငျသညျအသေးစိတ်အတွက်နည်းပညာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ဘယ်မှာဗွီဒီယိုကြည့်တာပိုမိုလွယ်ကူသင့် task, ဆံပင်၏လုပ်လေးကို၏ဆောက်လုပ်ရေး
တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အ option ။ ဒါပေမယ့်ငယ်ရွယ်မင်းသမီးများအတွက်ဆံပင်၏လုပ်လေးကိုလုပ်ပုံကို။ လိုချင်သောတည်နေရာဆံပင်ပုံစံတွေကိုရွေးချယ်ပါနှင့် ponytail အတွက်ဆံပင်စုဆောင်းပါ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ရော်ဘာတီးဝိုင်းပေါ်တွင်တင်နှင့် 1 အချိန်လိမ်။ အဆိုပါကွင်းဆက်အမြတ်ဆံပင်ကိုဆန့်သော်လည်းမလုံးဝပေမယ့်မှသာအနာဂတ်လေးကို၏ကွင်းဆက်အရဤမျှလောက်, "မျက်စိ" ပေါ်တွင်။ သွားဖုံးကိုထပ်ဆံပင်အခြားဘက်ခြမ်းမှဆမ်းပြီးထပ်မံအတော်လေးရလဒ်ကွင်းဆက်မှဆန့်ကိုမလိမ်။ ကျနော်တို့ကဒုတိယ "မျက်စိ" လက်ခံရရှိသည်။ အားလုံးတစ်ဦးရော်ဘာတီးဝိုင်း fix ကိုထပ်ဦးညွှတ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ ကို "နားရွက်" အကြားနှင့်သွားဖုံးအောက်မှာမမြင်ရတဲ့သုံးပြီးဖုံးကွယ်ကြောင့်ဖြတ်သန်းနေဖြင့်သွားဖုံးနှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသောအမြီးအဖုံး။ ဦးညွှတ်ခြင်းနှင့် fluffs အလျောက်။ ဆံပင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသင်တစ်ဦးတောက်ပအနားကွပ် add နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်ပေါင်းထည့်လို့မရပါဘူး။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဆံပင်၏ယက်လုပ်ခြင်း, မိမိလက်နှင့်အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ငန်းရှင်များ, ငါတို့ပဲလက်ရရန်ရှိသည်များနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုထုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို Babette ကြသနည်း
သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ဆံပင်ကြီးထွားမှုအတွက်မုန်ညင်း
ဘာသာစကား Venetian ပျေါလှငျ
ကျစ် - ဆံပင်
Enrobing ဆံပင် - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုများနှင့်စည်းမျဉ်းများ
ပေါ့ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဆံပင် restore လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လည်ချောင်းနာ ​​- အကြောင်းရင်းများ
မော်ဒယ် Candice Swanepoel
Cardial အမျိုးအစားပေါ် VSD
တိမောသေ Dalton ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
အဆိုပါကလေးအနာပေါက်နားကိုရှိပါတယ် - အိမ်မှာဘာလုပ်ရမှန်း?
ဘောင်းဘီအောက်မှဖိနပ် - ဘောင်းဘီ၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်အရောင်များ၏ညာဘက်ပေါင်းစပ်
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ lasagna အဘို့မုန့်စိမ်း
မော်ရိုကိုမှခရီးသွားဆန့်ကျင် "ရီးရဲလ်" စီရော်နယ်ဒို
ယခုပင်လျှင်မွေးဖွားပေးသော? Chloe Kardashian ကိုယ်ဝန် ပတ်သက်. သတင်းစကားကိုအပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမျက်ကပ်မှန်ထိမှန်
Feng Shui အပေါ် ROOM တွင်တိုက်ခန်း